अब स्मृतिमा मात्रै कलाकार भीमबहादुर थापा, वनमा गाई छाडेर सेनामा भर्ती हुन गएका थिए – Rajdhani Daily
अब स्मृतिमा मात्रै कलाकार भीमबहादुर थापा, वनमा गाई छाडेर सेनामा भर्ती हुन गएका थिए
‘गल्लाको पछि लाग्ने हैन नि, फेरि पछि लागेर जालास्,’ कलाकार भीमबहादुर थापालाई उनका बाले भनेका थिए । दुई वर्षअघि मैतीदेवीस्थित कलाकार थापाकै घरमा भेट्दा समाचारदातासँग थापाले युद्धका गर्विलो अनुभूति सुनाएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका कलाकार थापा अब स्मृतिमा सीमित रहेका छन् । बुधबार राति २ बजे मैतीदेवीस्थित निवासमै ९२ वर्षको उमेरमा उनको निधन भयो । बुधबारै पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
सन् १९३९ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो भने सन् १९४२÷४३ तिर नेपालका गाउँघरमा गल्लाहरू (केटाहरूलाई युद्धमा जान फकाउने एजेन्ट) सक्रिय थिए । त्यसबेला खोटाङको रावा लामिडाँडा अति दुर्गम मानिन्थ्यो । सञ्चारको कुनै साधन थिएन । ‘गल्लाहरूले फलानो गाउँबाट यति केटा लगे रे,’ कसैले सुनाउँथ्यो । भीमबहादुरका बाले पनि त्यही सुनेका थिए । छोरालाई गल्लाले लैजाला कि भन्ने चिन्ताले उनलाई सम्झाउँदै भनेका थिए, ‘गल्लाहरूसँग गइस् भने गोली हानेर मार्छन् ।’
१७ वर्षे लक्का जवान थिए भीमबहादुर । जुत्ता चप्पल के हो थाहा थिएन । पढाइ लेखाइ कल्पनाबाहिरको कुरा थियो । घरमा हल गोरु, गाई, भैंसी र बाख्रा थिए । मकैको च्याख्ला खाएपछि दिनभरि गोठालो जानु उनको मुख्य काम थियो । घरभन्दा अलि तल जंगल थियो । त्यही जंगलमा दिनभरि गाई चराउँथे र बिहान बेलुका घरको काम गर्थे ।
जंगलमा गाई चरिरहेको थियो । उनी रुखको हाँगामा बसिरहेका थिए । दुई जना पाइन्ट र जुत्ता लगाएका मान्छे आए (उति बेला पाइन्ट र जुत्ता लगाउने मान्छे हुन्नथे गाउँमा) । ती मान्छेले भने, ‘ओइ केटा तल आइज कुरा गरम ।’ नचिनेको मान्छेले बोलाएपछि उनी एक छिन हच्के । उनीहरूले फेरि भने, ‘आइज न केटा, हामी त्यही पल्लो गाउँका हौं, कुरा गरम ।’
भीमबहादुर रुखबाट ओर्ले । दुईमध्ये एउटाले प्याट्ट तिघ्रोमा हिर्काउँदै भन्यो, ‘यत्रो तिघ्रा भाको मान्छे गाई चराएर बस्छस् ? हिँड हामीसँग, नयाँ पाइन्ट नयाँ जुत्ता लगाउन पाइन्छ ।’
उनीहरूलाई कहाँ जाने भनेर सोध्न समेत सकेनन् भीमबहादुरले । मात्रै उनीहरूको कुरा सुनिरहे । ‘यही वनमा गाई चराउने हो भने तेरो जिन्दगी यत्तिकै बित्छ । मान्छे बन्ने कि गोठालो ? आफैं विचार गर,’ गल्लाहरूले भनेका थिए ।
घाम ढल्केपछि गाईवस्तु उकालो लाग्न थाले । ‘हामी भोलि पनि आउछौं, भोलि कुरा गरौंला । हामीसँग भेट भएको कुरा घरमा नभन् नि,’ गल्लाहरूले भीमबहादुरलाई अनुरोध गरेका थिए ।
त्यस दिन उनले घर गएर गाई बाँधे । भोलिपल्ट उही समयमा गाई लिएर वनमा गए । घाम आधा ढल्केको थियो । अघिल्लै दिनका मान्छे आएर सोधे, ‘के विचार गरिस् त ।’ भीमबहादुरले जवाफ दिएका थिएनन् । अर्का व्यक्तिले थपे, ‘यतिका मान्छे गाई चराएर बस्दैन । हामीसँगै जान्छ र मान्छे बनेर फर्किन्छ ।’
भीमबहादुरले भनेका थिए, ‘सवाल जवाफ केही गरिनँ, पछि लागेर गएँ । गाई बाख्रा वनमै छोडिदिँए । पहिलो दिन पल्लो जंगलमा पु¥याएपछि गल्लाहरूले एक छिन थकाइ मारम भनेर जंगलमै राखे । साँझ झमक्क भएपछि मात्रै हिँडाए । आधा रात हिँडेपछि मात्रै आफू जस्तै अरू तीन जनासँग भेट भयो ।’
भीमबहादुरले थप स्मृति सम्झँदै भने, ‘रातभरि हिँडाउँथे, दिउँसो जंगलमा सुताउँथे ।’ किन त्यसो गरे त्यतिबेला भीमबहादुरले थाहा पाएनन् । पछि बुझे, गाउँका मान्छेले थाहा नपाऊन् भन्नका लागि राति मात्रै हिँडाएका रहेछन् । त्यसरी गल्लाहरूसँग गएर अंग्रेज सेनामा भर्ती भएका थापाले बर्माबाट दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका थिए ।
दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि नेपाल फर्किएका थापाको कला यात्रा नेपाली सेनाले आयोजना गर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट सुरु भएको थियो । नेपाली सेनाकै रेडियो कार्यक्रम हुँदै टेलिचलचित्र र फिचर फिल्ममा अभिनय गरेका थिए ।
निर्देशक दीपाश्री निरौलाले कलाकार थापालाई ‘धर्म बा’ बनाएकी थिइन् । टेलिशृंखला ‘देवी’मा काम गरेपछि दीपाश्री निरौला र थापा नजिक भएका थिए भने ‘तीतो सत्य’मा थापाले दीपाश्रीकै बाको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनको पछिल्लो फिल्म ‘छक्का पञ्जा–२’ हो । पछिल्लो समय छाती, फोक्सोलगायत समस्याबाट ग्रसित थापाले कम अभिनय गर्न थालेका थिए ।